Daawo: Ra’iisul wasaaraha magacaaban oo soo diray farriintii ugu horreysay - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha la magacaabay ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo soo diray farriintiisii ugu horreeyey tan iyo intii xilkaas loo magacaabay, wuxuuna kula hadlay xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya.
Rooble ayaa qoraalkiisa ku yiri “Waxaa farxad ii ah in aan idinla wadaago, in aan si sharaf iyo dareen masuuliyadeed leh aan u aqbalay kalsoonida uu isiiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iiguna magacaabay Xilka Ra’iisul Wasaaranimo ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.”
“Sidaas daraadeed, waxaan doonayaa in aan codka kalsoonida waydiisto Golaha Shacabka, aniga oo rajaynaya in ay isiin doonaan codka kalsoonida, si aan u guto waajibaadkayga.”
Wararka ayaa sheegaya in Rooble la filayo in maalinta Isniinta uu Baarlamaanka codka kalsoonida u qaado, waxaana uu saacadihii tegay waday kulamo gaar gaar ah oo uu ku kasbanayo xildhibaannada, si ay codka kalsoonida u siiyaan.
Rooble ayaa haddii la siiyo codka kalsoonida si deg deg ah usoo dhisi doona xukuumad, ayada oo xog aan helnay ay sheegeyso in wasiirada xukuumadda ay inta badan diyaarsan yihiin.
Ra’iisul wasaaraha cusub ayaa la magacaabay Khamiistii saacado un kadib markii heshiis laga gaaray arrimaha doorashada, taasi oo meesha ka saartay inuu wax kaalin ah ku yeesho go’aanada la xiriira doorashada, waxaana hadda u taal shaqo ah inuu soo dhiso xukuumad fuliso waxyaabihii lagu heshiiyey.
Si kastaba, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray Raiisul Wasaare Rooble In uu deg-deg ku soo dhiso Xukuumad tayo leh oo dalka horseedda in ay ka dhaqan geilso doorasho , dadaal muuqdana gelisa sidii loo xoojin lahaa guulaha laga gaaray amniga, dib u dhiska Ciidamada Qalabka sida, horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha, baahinta adeegyada aas-aasiga ah, kamiro dhalinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo musuqmaasuqa.
The post Daawo: Ra'iisul wasaaraha magacaaban oo soo diray farriintii ugu horreysay first appeared on Caasimada Online.